स्थानीय सभाः सवाल छान्दै समाधान - Everest Dainik - News from Nepal
स्थानीय सभाः सवाल छान्दै समाधान
रनि विवश, कञ्चनपुरः पाँच दिन साउन २२ गते अघि कृष्णपुर नगरपालिका–१ श्रीपुरको चन्द्र सूर्य आधारभूत विद्यालयमा स्थानीय सभाको बैठक बस्यो । बैठकमा विषादी रहित तरकारी उत्पादन, बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालन, निर्माण गुणस्तर लगायतका विषयमा छलफल गरी सवालका रुपमा निर्णय गरियो ।
‘स्थानीय सभामा स्थानीय समस्यामाथि छलफल हुन्छ, ती समस्याबाट सवाल निक्र्यौल गरी समाधानका लागि पहल गरिन्छ’ गैर सरकारी संस्था संजिविनी नेपालका सह कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र चुनारा भन्छन् ।
संजीविनी नेपालले नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफदेही परियोजना अन्र्तगत कृष्णपुर गरपालिकामा स्थानीय समस्या समाधानका लागि स्थानीय सभा गठन गरिएको छ । ९ सदस्यीय स्थानीय सभाका संयोजक ढुण्डीराज भण्डारी छन् ।
सभाका हरेक बैठकमा संयोजक भण्डारी सहित सदस्यहरु गाउँ वस्तीका नयाँ समस्या ल्याउँछन् । ती समस्याबाट सवाल छनौट गरी समाधानका लागि पहल गर्छन् ।
‘म त अचेल जता जान्छु, त्यतै समस्या सुनाउँछु, बानी नै त्यस्तै भई सक्यो’ स्थानीय सभाका संयोजक भण्डारी भन्छन्,‘यसरी समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा केही त हल भई सकेका छन् ।’
सभाको पछिल्लो बैठकमा वडा नं. १ का ७ सय घरधुरीलाई मध्यनजर गरी छलफल गरिएको थियो । विषादी रहित तरकारी उत्पादनलाई पहिलो नम्बरमा छलफल गरी सवालका रुपमा निर्णय गरिएको थियो ।
‘सबै वासिन्दालाई विषादी रहित तरकारी खुवाउन स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले आज मैले यो सवाललाई बैठकमा ल्याए’ संयोजक भण्डारीले भनेका थिए, ‘यसलाई समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा गुहार गर्छु ।’
श्रीपुरमा बैठकमा संजिवीनि नेपालका कार्यकारी निर्देशक नितु भट्ट भण्डारी, सह कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र चुनारा, अधिकारकर्मी पारस गिरी, लक्ष्मी मल्ल लगायतका सभाका सदस्यहरु सहभागी थिए ।
स्थानीय सभा गठनपछि सवालका रुपमा अघि सारिएका स्थानीय समस्याहरु समाधान हुन थालेका छन् । हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, अन्त्येष्टि घाट लगायतका सवाल समाधान भएका छन् ।
संयोजक भण्डारीले हालसम्म समाधान गरिएको सवालहरुको फेहरिस्त सुनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य सम्बन्धी सुनाए ।
‘स्वास्थ्यका निम्ति सवाल उठायौ, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई छ, त्यहाँ अहेबले निःशुल्क रुपमा सेवा दिदै आएका थिए, स्थानीय सभाको पहलपछि अहिले तलब पाउँछन्’ उनले भने । निगालीस्थित स्वास्थ्य इकाईमा अहेव योगेन्द्र साउँद सुरुवातदेखि निःशुल्क रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।
कृष्णपुरका स्थानीय साउँदले गत वर्ष तलब नपाएर काम गर्दा समेत सन्तुष्ट भएको बताएका थिए ।
‘स्थानीय सभाले अहेव साउँदको सेवाको कदर गर्दै नगर प्रमुख कृष्ण बहादुर हमालसम्म पुगाएका थियो, त्यसपछि नगर प्रमुख हमालले अहेव साउँदलाई नगरपालिकाबाट तलब पाउने व्यवस्था गरि दिनु भयो’ संयोजक भण्डारीले भने ।
स्थानीय सभाका संयोजक भण्डारी आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य इकाई भवन बनेको छ । उनले आफ्नो नाममा उधारो समान लिएर भवन बनाएका छन् । उधारो तिर्न सकिएको छैन । ‘उधारो लिएर भवन बनाए, त्यो बेला कोही आएन, अहिले त्यहाँ अलिकति पैसा आएको छ, म बन्छु ऊ बन्छ भनेर रस्साकस्सी छ’ चित्त देखाउँदै भण्डारीले भने ।
याे पनि पढ्नुस जैविक धार्मिक पर्यटन मार्ग म्याराथनको उपाधि सेनाका दनुवारलाई
स्थानीय सभाको पहलमा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । वडा कार्यालयले स्थानीय सभाको पहलमा यस अन्त्येष्टि घाटका लागि चार लाख बजेटि विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि संयोजक भण्डारी सहित तीन जनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
अन्त्येष्टि घाटबाट कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. १ सहित शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा ८ र ९ का वासिन्दा लाभावान्तित हुने छन् । खानेपानी योजना सञ्चालनलका लागि स्थानीयको लागत सहभागिता स्वरुप रकम संलकन गरिएको छ भने कृष्णपुर नगरपालिकाबाट शिक्षा क्षेत्रका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गराइएको छ ।
श्रीपुर बैठकको एजेण्डामा अघि सारिएको विषादी रहित तरकारी खेतीका लागि संयोजक भण्डारीले एक घर एक टनेल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका थिए । केही महिना अघि संयोजक भण्डारी र सभाका सचिव तोप बहादुर महरा पाल्पा भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँका स्थानीयका खेतमा देखिएका टनेल खेतीमा भण्डारी आकर्षित भएका थिए ।
‘त्यहाँ जसरी टनेल खेती गरिएको थियो, त्यसरी नै यहाँ पनि खेती गर्ने सपना त्यही देखेर आएको हुँ’ उनले भने । स्थानीय सभाका सचिव महरा भने पूर्व लडाकु हुन् । कैलालीको अत्तरियास्थित होटलमा काम गर्दागर्दै श्रमजीवि वर्गको राज्य सत्ता ल्याउन जनयुद्धमा होमिएका महरा अहिले स्थानीय समस्या समाधानमा सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस मेयर चन्द सवार गाडी दुर्घटना
डडेल्धुराको भित्री मधेस जोगबुडामा जन्मिएका अहिले कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा बस्दै आएका छन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेनाका लडाकु महरा शान्ति स्थापनापछि शिविरमा पाँच लाख रुपैँया लिएर फर्किएका थिए ।
‘जनयुद्ध शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आई पुग्यो, यो सभामा आई सकेपछि भेटघाट भएको छ, समस्या समाधानका लागि सबै मिलेर लागि रहेका छौ’ सचिव महराले भने । सभा सदस्यहरुमा पूर्व लडाकूदेखि युवा, जेष्ठ नागरिकसम्म छन् । सभाका सदस्य द्रोपति भण्डारी स्थानीय सभाबाट समस्या समाधान भएको देख्दा खुसी लागेको बताउँछिन् ।
‘पहिला मिल जानु पिपलाडी जानु पथ्र्यो, अचेल गाउँमै मिल छ, बाँचेपछि अरु पनि देखिने होला भन्ने ठान्छु’ उनले भनिन्,‘सबै मिलेपछि समस्या त समाधान हुँदो रहेछ ।’संजीविनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक नितु भट्ट भण्डारीले स्थानीय सभाको सवाललाई संस्थाले सदा साथ दिएको बताउँछिन् । ‘सवाल समाधानमा संस्थाको पूर्ण रुपमा सहयोग हुन्छ’ उनी भन्छिन् ।
ट्याग्स: कञ्चनपुर, कृष्णपुर नगरपालिका, रनि विवश